Guddoomiyaha UCID Oo Xarunta Xisbigiisa Ku Qaabilay Qalbi Dhagax | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa maanta xarunta guud ee xisbiga ku qaabilay Col. C/kariin Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan jabhadda ONLF oo maalmahan socdaal ku jooga Hargaysa.
Waxaanu Qalbi Dhagax iyo xubnaha la socday uga mahad celiyay socdaalka ay ku yimaadeen Somaliland, taasoo uu ku tilmaamay in ay ka ddanbaysay marti qaad uu isagu ugu balan qaaday mar dhawaan uu safar ku tegay magaaladda Nairobi.
Kulanka ka dib Eng. Faysal oo ugu horayn ka dareen celinayay socdaalka Qalbi Dhagax ee Hargaysa waxa uu yidhi “Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa C/kariin Sheekh Muuse iyo weftiga la socda oo ka soo jawaabay marti qaadkii aanu u samaynay. Tallaabadani waa tallaabo bilaw ah oo cusub bog cusub ayaanan samaynaynaa”.
Geesta kale guddoomiyaha UCID ayaa soo dhaweeyay guud ahaan isbedeladda siyaasadeed ee ka socda Geeska Afrika gaar ahaana kuwa degaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hormoodka ka yahay raysal wasaaraha Itoobiya.
Waxa kaloo uu sheegay in Somaliland ay la gudboontahay sidii ay ula jaan qaadi lahayd isbedeladda siyaasadeed ee ka socda Geeska Afrika, isla markaana loo baahan yahay in doorkii ay arrimaha Soomaalida ka qaadan jirtay ka qaadato.
“Waxaan ugu hambalyaynayaa siyaasadda fur-furan ee uu la yimid raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Aad iyo aad ayaanan u taageerayaa, ee Geeska Afrikoo dhan ku saabsan.
Hadaba si aynu inaguna (Somaliland) Geeska ula jaan qaadno, oo 360 degree ayay isbedeshay siyaasadii Geeska Afrikee, waa in inaguna haddii aynu nahay Somaliland 360 degree aynu wareejinaa.
Waa in doorkii arrimaha Soomaalida aynu ka cayaari jirnay soo celinaa, oo maanta meesha ugu darani waa Soomaaliyee, waa in arrimaha Soomaaliya aynu gacan ka gaysanaa”ayuu yidhi Eng. Faysal.
Waxa kaloo isna halkaas ka hadlay C/kariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan jabhadda ONLF, waxaanu sheegay in imaatinkiisa Somaliland uu ka danbeeyay marti qaad uu ka helay guddoomiyaha xisbiga UCID mar ay dhawaan ku kulmeen dalka Kenya.
Waxaanu xukuumadda Somaliland iyo goleyaasha baarlamaankaba uga mahad naqay in ay ogolaadeen in isaga iyo xubnoo kaloo ka tirsan ONLF ay yimaadaan Hargaysa.
Waxaanu yidhi “Guddoomiye Faysal, oo hadda ka horna aanu mar isku aragnay Nairobi, marti qaadkii ugu horeeyayna ku dhawaaqay in aan imaado Somaliland, aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa.
Sidoo kale dawladda Somaliland iyo goleyaasha oo la qaatay in aanu nimaadno Hargaysa aad iyo aad ayay u ahayd arrin munaasib ah”.
Qalbi Dhagax waxa uu faah-faahin ka bixiyay kulamadii uu la yeeshay shir-gudoonka golaha Wakiiladda Somaliland iyo guddoomiyaha UCID kuwaasoo uu sheegay in ay diiradda ku saareen masaalixda geyiga Soomaalida iyo sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka mudadda u dhexeeyay.
“Waxaan ka wadahadlaynay inta badan masaalixda guud ahaan geyiga ay Soomaalidu degan tahay ayuu ahaa.
Waxaanan runtii aad culayska u saaraynay is-dhexgalka bulshadda iyo meelaha ay ka jiraan dhibaatooyinku sidii loo wada xalin lahaa iyo sidii loo soo celin lahaa walaalnimadii oo dhawr iyo labaatankii sanadood ee la soo dhaafay is jiid-jiidad iyo colaado ay kala gooyeen”ayuu yidhi Qalbi Dhagax.